Friday, 21 August 2015 05:55
သစ်ခုတ်လို့ သစ်တောပြောင်မပြောင်နှင့် ဦးတေဇအကြောင်းအနည်းငယ်
ဟိုတစ်ရက်က "ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်း သစ်တော သစ်ပင်တွေပြုန်းတီးရခြင်းရဲ့ အဓိကတရားခံ ဘယ်သူလဲ..?" ဆိုတာလေးရေးမိတော့ မတ်စေ့ဘောက်ကနေ "ခင်ဗျားက ဘာသိလို့လည်း သစ်တောတွေ ပြောင်တာ ဦးတေဇကြောင့်ဗျ၊ သူအကုန်ခုတ်ခဲ့လို့ ပြောင်သွားတာ၊ ဦးတေဇအကြောင်း ခင်ဗျားက ဘယ်လောက်သိလို့လည်း သူ့အကြောင်းသိရင် ရေးပြစမ်းပါ။
Sunday, 16 August 2015 15:51
ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်း သစ်တော သစ်ပင်တွေ ပြုန်းတီးရခြင်းရဲ့ အဓိကတရားခံဘယ်သူလဲ..?
မြန်မာပြည်မှာ သစ်တောသစ်ပင်တွေပြုန်းတီးရတဲ့တရားခံက မည်သူမည်ဝါပါလဲလို့မေးရင် လက်ညှိုးထိုးကြတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲကိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူလည်းဆိုတာ အမည်တပ်ပြောနေဖို့ တောင် မလိုဘူးထင်ပါတယ်။ သစ်ထုတ်လုပ်ငန်းနဲ့ နာမည်ကြီးသူ ဦးတေဇပါပဲ။
Saturday, 15 August 2015 06:26
ညီညွှတ်ခြင်းမှသည် ငြိမ်းချမ်းသည့် နိုင်ငံသစ်ဆီသို့
သြဂုတ်လ (၃)ရက်နေ့က နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့ KNU Peace Council၊ DKBA နဲ့ RCSS ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
Thursday, 09 July 2015 08:39
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ ငါးလလောက်လိုတဲ့အချိန်မှာ အင်အားကြီးပါတီနှစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့က ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်လှုပ်ရှားမှုများရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Monday, 06 July 2015 09:39
နိုင်ငံတကာပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေး ဆွေးနွေးမှုများ ဖြေရှင်းရာတွင် ကျင့်သုံးသောမူများအရ ဆောင်ရွက်လေ့ ရှိပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များရှိသော မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရာ၌ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းအတိုင်း ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလျှက်ရှိပါတယ်။
ဆရာကြီးပါရဂူ ကွယ်လွန်ခြင်း (၄)နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား